भारतमा भएको रेल दुर्घटना, साठीको मृत्यु
फरकधार / कात्तिक ४, २०७५
नयाँ दिल्ली– भारतको उत्तरी राज्य पञ्जाबस्थित अमृतसरमा शुक्रबार भएको रेल दुर्घटनामा परी करिब ६० व्यक्तिको ज्यान गएको छ । प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएअनुसार हिन्दू धर्मका पौराणिक पात्र रावणको पुत्ला जलाइने वार्षिक दशहरा पर्व हेर्न रेलको लिकनजिकै भेला भएका मानिसमाथि रेल गुडेपछि सो घटना भएको थियो ।
पुत्ला जलाउन लागेको भिडको आवाजले गर्दा रेल आफूतिर आउँदै गरेको रेलको आवाज नसुनिएका कारण सो दुर्घटना भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । तर, आफन्त गुमाएर आक्रान्त भएका व्यक्तिहरूले भने सरकारले सुरक्षालाई ध्यान नदिएको भन्दै शनिबार प्रदर्शन गरेका छन् ।
‘जालन्धर–अमृतसर एक्प्रेस’ नामक यस रेलको मार्गमा दर्जनौँ व्यक्ति जम्मा भएका र अचानक तीनवटा झट्कापछि रेल पल्टिएको बताइएको छ । शुक्रबार भएको यस दुर्घटना रेल चालकले रोक्न खोज्दा पनि नसकेको बताइएको छ । यद्यपि यस घटनापछि राजनीतिक पार्टीलगयातत रेलवे अधिकारीहरू र सर्वसाधारणबीच आरोप–प्रत्यारोप सरु भएको छ ।
दुर्घटनामा परी ५९ व्यक्तिको मृत्यु हुनुको साथै अन्य ९० जना घाइते भएको अमृतसर चिकित्सा सेवाका प्रमुख हरदीप सिंहले बताए । घाइतेमध्ये सातजनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । सिंहका अनुसार हालसम्म २५ शवको मात्र परिचय खुलेको छ ।
घटना शुक्रबार साँझ करिब ६ः३० बजे भएको थियो । घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या अझ बढ्न सक्ने प्रहरीको अनुमान रहेको छ । भारतमा हरेक महिना रेलमार्गबाट सवारी साधन पार गर्दा नै दुर्घटना भएको पाइन्छ ।
माेदीकी आमाकाे मिडियालाई सम्बाेधन
एजेन्सी | जेठ ९, २०७६
भारतमा किन चल्यो मोदी आँधी ? ७ कारण
चुनावमा होमिएका सेलेब्रिटीहरुको के छ अवस्था ?
भाजपाको भारी अग्रतापछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो ट्विट
कांग्रेस अध्यक्षबाट राजीनामा दिने मुडमा राहुल गान्धी, किन यति विक्षिप्त भए राहुल ?
काठमाडौंमा रात्रि व्यवसायः गुन्डाभन्दा प्रहरीको बढी डर !
खगेन्द्र संग्राैलाकाे टिप्पणी: दुईतिहाईको सरकारः बाँदरको हातमा नरिवल
फरक सिरिज: सिंहदरबार अन्डरडग्स: कृषि मन्त्रालयका अाचार्य दाइ जसकाे हाँसाे नै ब्रान्ड बनिसकेकाे छ
#farakक्षमता: जसका दुवै खुट्टा छैनन्, तर बुलेट बाइक चढ्छन्
अब पुरस्कारका लागि नेपालमा मनोनयन गर्दिनँ, विदेशी छोड्दिनँः बुद्धिसागर